Ungayikhulisa kanjani i-Wheatgrass ngezinyathelo ezimbalwa ezilula - Ama-Microgreens
Ungayikhulisa kanjani i-Wheatgrass ngezinyathelo ezimbalwa ezilula
Umhlahlandlela Okhulayo Ngokushesha
Izinto Zokukhula Zokolweni
Okuhlukile Komhlabathi noma Komhlabathi: Yikuphi Ongakusebenzisa?
Ezinye Izinsiza Ezidingekayo
Phambi Kokuhluma Isitshalo Sakho Sokolweni
Ukulungiselela Ithileyi Lakho
Amathiphu Wokunakekelwa Kokolweni
Ukuvuna Nokusebenzisa Ukolweni
I-Wheatgrass Yezilwane Ezifuywayo
Yini Okufanele Uyenze Nge-Pulp?
Ukugcina Imbewu Yakho
Ngizoba ngowokuqala ukuyivuma. Isikhathi esithile, bengicabanga ukuthi i-wheatgrass ingenye yalezo “zokudla kwezempilo” abantu abaziphuthaphutha ngazo ngoba becabanga ukuthi ziyimiqemane. Njengokuthi, ngubani ofuna ukudla iqabunga lotshani?
Kodwa ngangazi ukuthi ngingafunda indlela yokutshala i-wheatgrass nami, ngakho-ke ngiyizamile.
Ngemuva kokubona ukuthi kulula kanjani ukuyikhulisa nokuthi inezinzuzo ezithile zokudla okunempilo, ngashintsha umbono wami ngayo. Impela, akuyona i-panacea abanye abantu abacabanga ukuthi iyikho, kepha ishibhile futhi kulula ukuyikhulisa.
Futhi, kungukungeza okuhle kunoma iliphi ijusi engilenza ngalo enye yalawo ma-juicers we-wheatgrass amahle wonke umuntu ucashe ekhabetheni.
Ngakho-ke usukulungele ukuqala ukutshala i-wheatgrass, futhi? Ake sikhule!
Imbewu Emnandi Yokolweni:
IPowerGrow Organic, Non-GMO Hard Red Wheatgrass Seed
Amathileyi Akhulayo Eplastikhi Emnyama anezimbotshana Zamanzi
Ukukhetha okuhle kwenhlabathi noma okunye okunye:
I-FoxFarm FX14053 I-Ocean Forest Organic Potting Soil
I-FoxFarm Coco Loco Potting Mix
I-Plantation Professional Ibanga le-Vermiculite
I-TerraFibre Hemp Khulisa Mat
Ukukhula KweBiostrate Mat
I-Micro-Mats Growing Mat
Ezinye Izimpahla Ezinhle:
Amabhodlela Esifutha Ahlala Njalo
I-Hydrofarm 48 ″ x 20 ″ Ukushisa Mat
Umanyolo We-Liquid Kelp Natural Seaweed
Igama Elivamile Isikolweni, ukolweni ovamile
Igama Lesayensi ukolweni
Isikhathi sokuhluma 2 izinsuku
Izinsuku Zokuvuna Izinsuku eziyi-7-10
Khanyisa Ukukhanya okungaqondile ekuqaleni, ilanga eligcwele kamuva
Amanzi Inkungu kabili ngosuku, ngaphezulu ezimeni ezomile
Ithempelesha 60-75 degrees Fahrenheit
Umswakama Kungathatha ezomile ezimeni ezimanzi
Umhlabathi Ukubumba inhlabathi noma okunye okunye kwenhlabathi
Umanyolo Umanyolo we-kelp ketshezi uhlanjululwe emanzini
Izinambuzane Izimpukane zezithelo, izimbungulu zotshani obumnyama
Izifo Isikhunta, isiqu noma izimpande zokugqwala, i-smut, i-ergot
Eqinisweni, uma unembewu kakolweni, i-potting mix, nesitsha esithile sokukhipha kahle ukuze uzifake, ungakhulisa utshani bukakolweni ekhaya. Kodwa-ke, kunezinhlobonhlobo eziningi zezinye izindlela zokukhula eziphakathi ezikhulayo ezitholakalayo. Ukusheshisa ukuhluma kwakho ngokusetshenziswa kwemikhiqizo ethile kungenza utshani bakho bukhule ngokushesha okukhulu. Ake sihlole izinqumo okuzodingeka uzenze ngaphambi kokuqala.
Imbewu kakolweni isilungele ukutshalwa.
Ngenkathi izinhlobo eziningi zikakolweni ojwayelekile ( ukolweni ) ingasetshenziselwa ukutshala utshani bukakolweni, imvamisa yizinhlobo zikakolweni zasebusika ezinzima ezisetshenziswayo. Ukolweni wasebusika udinga isikhathi ukuvuselelwa ukwakha amakhanda embewu, kepha hhayi ukuthuthukisa utshani uqobo.
Ukuthenga imbewu ehloselwe ukukhula njenge-wheatgrass ngokuvamile kungcono, njengoba ijwayele ukuba namazinga aphezulu wokuhluma. Ngenxa yesidingo sokusebenzisa inani elikhulu lembewu ukuqala ithreyi, ngincoma ukuthenga izikhwama ezinkulu zembewu ukuze ube nokwanele ukusebenza ngakho. Ngokujabulisayo, ukuthenga ukolweni wasebusika onzima onjengalona imbewu ye-wheatgrass ebomvu engeyona eye-organic ephilayo akubizi.
Amathileyi amaningi we-wheatgrass.
Ungasebenzisa izinhlobo eziningi zeziqukathi ukukhulisa i-wheatgrass yakho ngaphakathi. Iziqukathi azidingi ukujula kakhulu, ngoba ayidingi isikhala esiningi sokwakheka kwezimpande. Izitsha ezingajulile ezinemigodi embalwa kuzo zizosebenza, njengoba kuzosebenza nethreyikhi yesitshalo sepulasitiki noma yeterracotta.
Ngikhetha lokhu cishe 10 ″ x 20 ″ emathileyi epulasitiki anezimbobo zamanzi , njengoba behlinzeka ngotshani obanele ngomzamo omncane kakhulu. Vele unisele ithreyi futhi ulungele ukukhula.
Kubalulekile ukusebenzisa amathreyi anomsele owakhelwe ngaphakathi. Uma ukhetha esinye isitsha, qiniseka ukuthi ukhetha esisodwa esinamapayipi amahle kakhulu. Lokhu kuvimbela utshani bakho obusha ekuminzeni noma ekuthuthukiseni izinkinga zesikhunta.
Amathileyi we-coconut coir medium medium.
Umhlabathi omuhle wokubumba oyinyumba isebenza kahle, futhi iningi lethu linokunye eshedeni. Iza igcwele izakhi ezotshalwa utshani bakho ukuze zizuze kahle. Kodwa-ke, abanye abantu bayathanda ukusebenzisa sonke isitshalo esincane, izimpande nakho konke. Lokho kudinga ukuwashwa okwengeziwe. Kodwa-ke, utshani bakho abancane bunakho konke ukondleka abakudingayo ngaphandle komanyolo owengeziwe.
Kodwa-ke, kunezindlela eziningi zomhlabathi ezitholakalayo manje ezizonciphisa isidingo sokususa izingcezu zenhlabathi elahlekile.
Coconut coir iphethe okungaphezu kwesisindo sayo emanzini ngenkathi ivumela izitshalo zakho ukuthi zibe nepayipi elihle. Inhlanganisela yokubumba engenanhlabathi njenge ICoco Loco , ehlanganisa ukugcinwa komswakama coir kakhukhunathi kanye perlite nezakhamzimba ezengeziwe, kungenye indlela enhle. Ungasebenzisa futhi i-coconut coir ngaphandle kwe-perlite kanye nezithasiselo, kepha kungadingeka ukuthi ungeze okunye ukondleka ngendlela ye Umanyolo we-kelp .
Kusetshenziswa inhlanganisela ye- busisiwe futhi a Umanyolo we-kelp izophinde inikeze imbewu enhle yokuqala ephakathi. IVermiculite uqobo iyimbiwa futhi ngenxa yalokho ayinazo izakhi zomsoco eziningi, kepha i-kelp izonikeza kalula konke okudingekayo ukuze kukhule kahle.
Ekugcineni, kunezindwangu zemvelo ezahlukahlukene ezilungele ukusetshenziswa ekukhuleni zonke izinhlobo zamahlumela, ama-microgreens, notshani. Ezinye izibonelo zazo yilezi I-TerraFibre (Yenziwe nge-fiber ye-hemp yezimboni), I-Biostrate (i-fiber yemvelo yezwa), noma Ama-Micro-Mats (imicu yezinkuni ezisikiwe). Indwangu ye-Tencel nayo iyindlela enhle. Izindwangu zemvelo ezinjengalezi zingadinga ukusetshenziswa kwe- kel k Umanyolo ukukhulisa isivuno esinempilo, esinamandla.
Sekukonke, ukuxubana kokubhaka kuzonikeza ukudla okunomsoco otshanini bakho, kulandele ikhukhunathi coir ne-vermiculite. Kodwa-ke, izindwangu zemvelo zinganciphisa ukusabalala kweziqu zesikhunta. Lezi zinketho zonke zizosebenza, kuncike nje kulokho ofuna ukukusebenzisa.
ukhilimu omuhle kakhulu wokusika imilenze
Ngakho-ke usuthole imbewu ethile ye-wheatgrass, unethreyi lakho lokukhulisa (elinamanzi amahle!), Futhi ukhethe indlela yokukhula. Yini enye edingekayo?
Ngincoma ukutshala imali kwiphakethe le- amabhodlela okufafaza aqinile . Uzodinga ukungcolisa i-wheatgrass yakho njengoba ikhula ukuyigcina inamanzi amaningi. Ukuba namabhodlela amaningi esandleni kusho ukuthi ungahlala unebhodlela elitholakala ngamanzi alula, nelinye elinenhlanganisela kamanyolo we-kelp namanzi uma kwenzeka udinga ukuqala ukukhula.
Uma kusebusika futhi ukhula izinto egalaji elibandayo, ungahle ufune i- umshini wokushisa wezithombo ukusiza ukuletha ukushisa kwesilinganiso sakho endaweni enhle yokuhluma. Kodwa-ke, uma uqala i-wheatgrass yakho endlini, izinga lokushisa lendlu yakho lihle.
Izitshalo ezikhula ngokushesha njenge-wheatgrass akunzima ukuzikhulisa, uma usufunde izisekelo! Ithileyi le-wheatgrass lingatshalwa unyaka wonke, ngakho-ke ungaliqala nganoma yisiphi isikhathi.
Imbewu esanda kuhluma.
Ngenkathi ungakwazi ukutshala ngqo emathileyi, uzoba nemiphumela engcono kakhulu uma uhluma imbewu ngaphambi kokutshala. Akuthathi isikhathi esithe xaxa futhi kwenza isivuno sakho sikhiqize kakhulu - ngakho-ke kwenze!
Faka imbewu yakho endishini bese ufaka amanzi amaningi kabili kuya kathathu esitsheni. Qiniseka ukuthi icishe ibe ngu-60-70 ° ukuze kuhlume kahle. Vumela ungene amahora angu-12.
Ngemuva kokuthi imbewu yakho ifake amanzi, khipha isitsha. Ungasebenzisa amanzi ukunisela ezinye izitshalo ozikhulayo, njengoba kugcwele umsoco ovela embewini.
Hlanza imbewu yakho ngamanzi amaningi uphinde ukhiphe futhi. Sabalalisa amahlumela akho kuthawula lephepha phezulu kwe-counter okungaphandle kwelanga eliqondile. Phinda inqubo yokuhlanza nokukhipha kuze kube yilapho ubona ukuqala kwempande kuningi (noma konke) kwamahlumela akho.
Izinsuku ezimbili zokukhula.
Uma usebenzisa umhlabathi omuhle wokubumba, engeza kumathileyi wakho wokutshala. Yithambise ngokukhululekile ngamanzi, kodwa ungayitholi imanzi kakhulu - awufuni noma yimaphi amadaka akha phakathi. Qiniseka ukuthi ubheka ukuthi inhlabathi imanzi yonke indawo ezansi ngeminwe yakho. Ufuna izinkomishi eziyi-6-8 zayo ngo-10 10 x20 ″ tray. Amathileyi akudingeki agcwale, adinga okungenani u-1/2 ″ kuya ku-1 ″ womhlabathi kuwo ukuze anikeze isikhala sezimpande.
Ukuthola i-vermiculite noma i-coconut coir, sebenzisa izinkomishi eziyi-6 ngetreyi elingu-10 × 20.. Qiniseka ukuthi okungenani ujule ngo-1/2.. Fafaza amanzi ebusweni bese uwendlala. Ukuze usebenzise i-vermiculite, sebenzisa ilitha lamanzi. Ukuze uthole i-coconut coir, vele uqiniseke ukuthi imanzi, kepha hhayi i-soggy (i-coconut coir igcina amanzi kahle).
Omata bemvelo abakhulisa ifayibha kufanele basikwe ukuze balingane kuthileyi wakho futhi kufanele benziwe buswakame njengoba kukhonjisiwe emaphaketheni abo. Eziningi zalezi zincoma ukucwilisa okufishane emanzini ukuze zikunike amanzi, kodwa akumele zigudle kakhulu noma kungenjalo zingase ziqale ukuwohloka.
Uma ungathanda, ungangeza ukukhanya okukhanyayo kelp ketshezi emanzini akho lapho umanzisa indawo yakho yokutshala. Lokhu akudingekile ekuhlanganiseni izingxube, kepha kungazuzisa ngamanye ama-mediums.
Izinsuku ezintathu zokukhula.
Sakaza imbewu yakho ngokulinganayo emhlabathini. Uma ufuna, ungawageza okokugcina ngaphambi kokuwasabalalisa ukuze uqinisekise ukuthi anomswakama futhi alungele ukutshalwa. Iningi labantu livame ukutshala ngaphansi ekuqaleni, ngakho-ke zizwe ukhululekile ukusabalalisa imbewu eningi kuthileyi wakho. Ikhiqiza isitshalo esincane kunembewu uqobo.
Mboza ugqoko lwakho ngelinye ithileyi elibheke phezulu. Lokhu kubalulekile ngesikhathi sokuqala kokukhula ukugcina indawo ekhulayo imnyama futhi imanzi. Leli threyi kufanele futhi libe nezimbobo ukuze umoya ukwazi ukuzungeza ungene nangaphandle komgodi.
Beka amathreyi akho endaweni ekhanyayo ephansi okushisa kwegumbi.
Izinsuku ezinhlanu zokukhula.
Utshani bakho butshaliwe! Manje ake sidlule indlela engcono kakhulu yokukhulisa ukukhula kwekhwalithi kusuka ku-turf yakho encane.
I-wheatgrass ehlwanyelwe ngaphambili idinga ukugcinwa ebumnyameni, okungenani ekuqaleni. Lokhu kulingisa ubumnyama obungaphansi kobuso benhlabathi. Ngemuva kwezinsuku ezingama-3-5, ungasusa lelo khava. Ngaleso sikhathi, utshani bakho kufanele bube cishe ngamasentimitha ukuphakama. Kungabukeka kuphaphatheka okuncane, kepha lokho kungenxa yokuthi ibingakatholi ukukhanya njalo.
Beka ithileyi lakho elingamboziwe eduze kwewindi ngokukhanya okukhanyayo, okungaqondile. Kuzoqala ukuluhlaza. Uma kuthola ilanga eliqondile isikhathi esifushane, kulungile futhi. Umgomo ukukhuthaza leyo hue eluhlaza ekhanyayo. Ngithola ukuthi okwami ​​kusebenza kahle ekukhanyeni okungaqondile okuqondile noma ngaphansi kokukhanya okukhulayo.
Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, ungahambisa ithileyi lakho liye endaweni lapho lithola khona ilanga eliqondile isikhathi esiningi sosuku. Noma kunjalo, kungahle kudinge amanzi amaningi ngaleso sikhathi, ngakho-ke hlola indlela yakho ekhulayo njalo ukuze uqinisekise ukuthi ikutholile okudingayo.
izinto zokubheja nomfana
Lapho uqala isivuno sakho, ufuna amazinga okushisa abe phakathi kwama-degree angama-60 kuya kwangama-75. Lokho kwenza ukuyikhulisa endlini kube inketho yakho enhle ukuqala, njengoba ukwazi ukugcina ibanga elilungile.
Lapho utshani bakho obusha sebufinyelele ku-1/4 kuya ku-1/2 ukuphakama, bungabekezelela amazinga okushisa aphansi noma ashisayo, inqobo nje uma izimpande zawo zihlala zikhululekile. Kodwa-ke, ngesivuno esihle kakhulu, iyalithanda ngempela lelo banga lama-60-75.
Uma izinga lokushisa lingaphezu kwama-degree angama-80, qiniseka ukuthi noma imaphi amathreyi e-wheatgrass embozwe anomoya omncane owanele wokuvimbela ukukhula kwesikhunta noma ukukhunta.
Yinamanzise kabili ngosuku usebenzisa ibhodlela elenza iphutha. Ekuqaleni, uzama nje ukugcina amahlumela enomswakama ngokwanele ukuthi angathola izimpande zawo emhlabathini noma phakathi. Lapho sebebeke izimpande zabo phansi, ufuna ukugcina indawo yokubumba noma ukukhula okumaphakathi okumanzi, kepha kungabi manzi. Lokhu kugcina amahlumela akho emanzi futhi kwakha ukukhula okuluhlaza okomdlandla.
Uma ithileyi lakho liselangeni eligcwele njalo, hlola indawo yakho ekhulayo njalo. Kungadinga ukuniselwa okungaphezu kokuphindwe kabili ngosuku ngosuku. Uma inhlabathi noma okuphakathi kungenamanzi kakhulu, qhubeka futhi uyihlume kaningi kaningi.
Akufanele ube nokuhlanganisa amanzi ngaphezulu kwesiqongo semethi ekhulayo, i-coir, noma i-potting mix. Amanzi amaningi angadala ukuthi i-wheatgrass yakho icwile.
Uma ufuna ukukhulisa ukukhula kwe-wheatgrass yakho, unganciphisa i-kelp ewuketshezi ebhodleleni le-spray olisebenzisela ukunisela ngalo. Akufanele usebenzise lokhu njalo uma unisela, kepha nakanjani kungakhuphula ukukhula!
Lapho i-wheatgrass yakho ifinyelela okungenani amasentimitha ayisithupha ukuphakama, sekusondele isikhathi sokuvuna. Manje yisikhathi sokulungiselela ukuyivuna nokuyisebenzisa.
Isitshalo esisanda kuvunwa.
Isikhathi esihle sokuvuna i-wheatgrass kulapho sesifikile esigabeni sokuhlangana. Kuleli qophelo, iqabunga seliqala ukuhlukana noma lakhe iqabunga lesibili. Lokhu ngokuvamile uma kungu-7-8 ″ ukuphakama. Ungayivuna isencane njengo-6 ″ ukuphakama, noma kunjalo!
Ukuvuna, ngincoma ukusika utshani ngesikele esibukhali sesikele esingaphezulu nje kwenhlanganisela yezimpande noma yiziphi izinsalela zembewu. Ummese obukhali kakhulu uzosebenza inqobo nje uma usika ngokuhlanzekile ngotshani ngaphandle kokuwukhipha.
Imvamisa ungathola izitshalo eziningi ngeqoqo elithile lembewu ngaphandle kwezinguquko ezibonakalayo zokunambitheka. Kodwa-ke, qiniseka ukufaka umanyolo omncane kelp ketshezi ngemuva kokuvuna ukukhuthaza ukukhula okusha. Imvamisa, abantu bathola izitshalo ezimbili noma ezintathu kuthileyi elinikeziwe ngaphambi kokuba batshale kabusha.
Ukuvuna ngaphambi kokusebenzisa kuyindlela enhle yokuqinisekisa ukuvuselelwa.
Ijusi le-wheatgrass elisha lingagcinwa ngokubanda emathreyini e-ice cube.
Ukugcina i-wheatgrass, qiniseka ukuthi yomile ngangokunokwenzeka. I-wheatgrass eyomile igcina ingcono kakhulu kunamanzi. Yifake esikhwameni sokukhiqiza esinethawula lephepha elomile elisongwe ngenqwaba ukuze limunce umswakama owedlulele. Yisebenzise ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze ingabuni noma yonakalise. Izogcina kalula izinsuku eziyi-3-4 ezigcinwe kanjena.
Njengoba ithileyi ivamise ukulungela ukuvunwa ngasikhathi sinye, futhi ungayifaka ijusi kuyo yonke into bese uqandisa noma yiliphi ijusi eleqile kumathreyi e-ice cube. Lawa ma-cubes amancane aluhlaza angaphonswa ku-smoothie yakho yasekuseni noma ingilazi yejusi yezithelo.
Uma ujwayelene ne-powder ye-wheatgrass, ungahle ube nentshisekelo yokwazi ukuthi kunendlela yokwenza lesi sithasiselo esisebenzisekayo ekhaya usebenzisa okomisa amanzi emzimbeni . Hlanza i-wheatgrass yakho kahle uma usuyivunile ukuze uqiniseke ukuthi alukho uthuli kuyo, bese usakaza utshani bube yingqimba encane emathileyi e-dehydrator.
Lapho sesiphelelwe amanzi emzimbeni ngokuphelele, ungasifaka impuphu bese ugcina impuphu esitsheni esingena moya ngephakethe le-dessicant ukuze ususe noma imuphi umswakama osalayo. Yisebenzise ngendlela ongathanda ngayo izimpushana ezithengwa esitolo.
Ukuhluza nge-juicer yokugaya.
Njengoba i-wheatgrass ingutshani kunokuba isithelo, kungaba yinkohliso ukukhipha ujusi. A ukugcoba ijusi izokhipha ijusi kalula kakhulu. Ama-juicers ama-Centrifugal awagundi utshani futhi akhiphe ujusi.
Ungase futhi usike kahle utshani bakho bese ubugaya esigqulweni nasezimbizeni. Yenza unamathisela ojiyile wesivuno somhlabathi, bese ufaka amanzi amancane bese ugaya isikhashana. Thela udaka esiqeshini seshizi phezu kwesisefo bese uvumela ujusi omningi ukuthi uhlunge ngenkathi ulungisa unama we-wheatgrass omningi. Uma usuwugayile wonke futhi wavumela ujusi ukuba ugeleze, thatha ngokucophelela i-cheesecloth bese ukhipha noma iliphi ijusi elengeziwe.
Kunendlela yesithathu engasetshenziswa futhi ukulungiselela ijusi le-wheatgrass, yize kunabantu abathi liyayifaka ijusi futhi iyindlela engezansi. Beka utshani bakho obusikiwe namanzi amancane kwisiprosesa sokudla bese uwushayela kuze kube yilapho uketshezi luhlaza okotshani futhi iningi le-wheatgrass selicolile. Ngemuva kwalokho, lungiselela isihluzi nge-cheesecloth bese ukhipha uketshezi.
Kuthatha cishe 1/4 inkomishi yotshani ukwenza ujusi.
Ikati elidla utshani.
Uma uke wakhula utshani bekati , kungenzeka ukuthi ubukhula utshani bukakolweni. Utshani bekati bungakhiwa nge-wheatgrass, i-oat grass, noma i-barley grass, noma inhlanganisela yezintathu. Utshani bezinja, yize bungajwayelekile, buyafana.
Ngenkathi amakati nezinye izinja bethanda ukuhlafuna utshani, akukhona ngezizathu ezifanayo nokuthi kungani sidla izitshalo. Amakati nezinja izidlo ezidla inyama, futhi azinawo ama-enzyme afanele wokugaya utshani kahle. Ngenkathi bethola inzuzo ethile yokudla okunomsoco (ikakhulukazi okuqukethwe uvithamini E, yize ngezinga elithile amanye amavithamini B), kungenzeka ukuthi bazolahla utshani.
Futhi yingakho amakati nezinja zigaya otshanini. Utshani bungadala ukuthi amakati alahle phezulu, okusiza bona balahle izinwele zezinwele noma okunye okungagayeki. Lokho kuzobenza bazizwe bekhululeke kakhudlwana futhi kungavimbela ukuqunjelwa. Ezinjeni, i-wheatgrass inomthelela omncane we-laxative, futhi isiza ukuqeda ukuqunjelwa. Ingakwazi futhi ukuxazulula isisu esithukuthele.
Awudingi ukwenza noma yini ekhethekile ukuyilungiselela izilwane ezifuywayo. Mane nje ukhulise isichibi esincanyana esenzelwe ngqo ukusetshenziswa kwesilwane futhi usivumele sihlafune kuso lapho sizwa isidingo.
Esikhundleni sokuvumela ikati noma inja yakho ihlafune otshanini, okungenzeka ukuthi inezibulala-zinambuzane noma okunye ukungcola noma izinambuzane kuyo, ukuzikhulisela utshani bazo obuzinikele kuyobanikeza ukudla okulula.
Amathileyi namathileyi wobuhle obuluhlaza.
Kukhona zonke izinhlobo zemibono laphaya zokusebenzisa i-wheatgrass pulp. Kunconywe konke kusuka kokudonswa kwenaliti ukufaka okokulunywa yiziphazamisi nokungezwa ngemicu yezinkwa. Kodwa ngokuthembeka, angikukhuthazi ukuzama ukukusebenzisa ngokwezokwelapha noma njengesengezo sefayibha ekudleni.
izingubo ezimhlophe ezimhlophe nezibomvu
Engikutusa ukukwenza nge-pulp yakho ukuyifaka ku uhlelo lokufaka umquba uma unayo. Uma ungenzi umquba wezikelemu, ungaxuba uginindela nephephandaba elithile elishiziwe, isithombo semifino, noma uthuli lwamapulangwe bese ulifaka enqwabeni yakho yomquba noma umquba we-tumbler . I-Wheatgrass pulp izobola ngokushesha futhi inikeze inzuzo eyengeziwe engadini yakho ejwayelekile. Ungayengeza futhi kufayela le- i-bokashi bin noma ibhakede .
Amathuba amahle ukuthi uzoba nembewu eyengeziwe ngemuva kokutshala kwakho kokuqala. Imbewu kakolweni igcinwa kahle endaweni epholile, eyomile. Ungazigcina efrijini uma uqinisekile ukuthi akukho mswakama esikhwameni. Ifriji nayo iyindawo enhle uma uzosebenzisa imbewu yakho kaningi. Faka isikhwama sakho sembewu esikhwameni sefriji bese ususa umoya omningi ngangokunokwenzeka lapho uwagcina. Uma unepakethe elenziwe nge-dessert, ungangeza lokho ukusiza ukuzigcina zomile.
Isakhiwo sezimpande esimangalisayo.
99.9% wesikhathi, ngeke ube nenkinga eyodwa yokukhulisa lesi sitshalo. Lezi zinto kulula kakhulu ukuzikhulisa! Kodwa-ke, ake sihlanganise ukuthi yiziphi izinkinga ezimbalwa ezikhona ngenkathi sikhula i-wheatgrass nokuthi singazilungisa kanjani.
Uma isivuno sakho siqala uku ncika phezu bese uphuzi , mhlawumbe usuyidedele isikhathi eside ngaphambi kokuvuna. Kepha ukuphuzi kungabuye kube uphawu lokuchelela ngaphezulu noma ngaphansi, ukukhanya okuncane kakhulu, noma ukuntuleka kwezakhamzimba kulowo okhulayo.
Izitshalo ezingaphansi kwamasentimitha ayisithupha ukuphakama futhi ziphuzi kufanele zihlolwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi indawo ekhulayo ayihluphi. Uma imanzi kakhulu, gwema ukuchelela kuze kube ngcono. Futhi, nikeza utshani bakho ukufinyelela elangeni eliqonde ngqo, ngoba lokho kungasiza ukukhuphuka komunye umswakama owedlulele.
Uma utshani bakho bungaphezu kwamasentimitha ayisithupha ukuphakama futhi buqala ukuphuzi, kungenzeka ukuthi uphuthelwe yisikhathi esifanele sokuvuna. Ukuze uqiniseke, ungangeza i-kelp encane ketshezi kuseshini yakho yokufafaza elandelayo. Uma iqala ukuluhlaza futhi, uyisindisile. Uma kungenjalo, qhubeka uvune njengokujwayelekile, kepha lahla ama-wheatgrass blade enqwabeni yakho yomquba bese ulinda ukuthi kukhule inqwaba entsha.
Futhi, khumbula ukuminyana kwembewu yakho . Cishe uzohlala ungena ezinkingeni zokukhunta uma utshala imbewu yakho kakhulu. Lokhu akuyona into enkulu njengoba ungavele uyihlanze isuke ngesikhathi sokutshala kufika isikhathi sokuvuna, kepha akubukeki kukhanga kakhulu futhi abanye abantu baphuma ngaphandle abakwazi ukuma.
Ukugwema le nkinga ngokuphelele, vele utshale imbewu encane kuthileyi lakho. Uma lokho kungayixazululi inkinga, ukuhambisa amathreyi akho uye endaweni enokuhamba komoya okuningi kuzosiza. Futhi ungakhula ngaphandle ukukhulisa ilanga nokuhamba komoya.
Izimpukane zezithelo ungasebenzisa amathreyi akho we-wheatgrass njengekhaya, futhi amafu amancane alezi zinambuzane ezindizayo ezindizayo azokuqhubela amantongomane (ikakhulukazi endaweni yokushisa). Indlela elula yokuzixosha lezi ukugcina umoya uzungeza indawo yakho ekhulayo. Ukubeka ifeni ngejubane eliphansi elibheke emathileyi akho kufanele kugcine lezi zinambuzane zingasebenzi. Kodwa-ke, kungadingeka ukuthi unisele kaningi njengoba ukuhwamuka kungenzeka ngokugeleza komoya okuningi.
Isilokazane esilimaza kakhulu yiyona imbungulu yotshani emnyama . Lezi zinambuzane zibhoboza izindwani zotshani bese zimunca umswakama wazo. Njengoba sifuna lelo jusi lotshani, lokhu kuyinkinga enkulu! Uma amahlumela akho otshani ekhula amabala amhlophe engxenyeni engenhla, ungahle ube nokutheleleka eduze ne-wheatgrass yakho. Kulula ukumane ulahle inqwaba yakho yamanje ukuqeda noma yimaphi amaqanda, bese uqala iqoqo elisha ngaphakathi.
Isikhunta ubukhulu becala yisifo esivame kakhulu kubalimi be-wheatgrass. Lokhu kubangelwa amanzi amaningi ngokweqile esakhiweni sotshani nezimpande. Ngenkathi isikhunta singeyona ingozi, ukunambitheka kungakhangi. Ungageza isikhunta esiningi uma sikhula, kepha uma kukhona umonakalo otshanini, lahla ingxenye elimele. Ukuvimbela isikhunta, gcina inhlabathi imanzi kodwa ingabi manzi, futhi uqinisekise ukuthi kunomoya omuhle ozungeze utshani bakho.
Abanye isiqu nezimpande kungathinta i-wheatgrass. Ukuvimbela lokhu, mane nje usebenzise indlela yokukhula oyinyumba bese uvuna njalo. Ungayivumeli ukuthi ikhule ngokweqile.
Smut kungenye inkinga. Lokhu kukhula okumnyama, okunothuli kungenye indlela yokutheleleka kwefungal. Uma uthola i-smut, khipha yonke iqoqo kufaka phakathi indlela ekhulayo. Ungayifaki kunqwaba yomquba. Geza kahle futhi ukhiphe igciwane ku-tray yakho ekhulayo ngenhlanganisela ye-bleach namanzi ukubulala noma yiziphi izinhlamvu zefungal ezisele ngaphambi kokuyisebenzisa kabusha.
Uma uvumela i-wheatgrass yakho iye embewini, unengozi encane ye- ukhunta ergot ukwakha. I-Claviceps purpurea yi-ergot ejwayelekile kakhulu kukolweni futhi ingakhula kuphela ezinhlokweni zembewu. Utshani uqobo abukho engcupheni. I-Ergot ingaba yingozi kubantu nasezilwaneni, kepha kulula ukuyivimbela: vele ungayivumeli iye enzalweni!
Q: Ingabe kufanele ngiyisebenzise kabusha indlela yami yokukhula?
IMP: Ezimweni eziningi, kungcono ukufaka indawo yakho ekhulayo. Umhlabathi wokubumba ungathola izinhlamvu zefungal kuwo ezingatheleleka ngamaqoqwana esikhathi esizayo, njengoba kunjalo nangokhokho kakhukhunathi. Izindwangu ezahlukahlukene zemvelo zimane nje azenzelwe ukusetshenziselwa kabusha.
Ungangeza ukuxuba kwakho okuyisisekelo kokubhaka noma i-coconut coir kumquba wakho bese umiselela nje. Izindwangu zemvelo zivame ukudinga izindawo zokwenziwa komquba ezimbonini, yize izindwangu ze-hemp fiber (njengeTerraFibre) nazo zingashiswa futhi zengezwe enqwabeni ejwayelekile yomquba. Zimane zithathe isikhashana ukudiliza ukwedlula yonke eminye imvundiso yakho.
Q: Ingabe i-wheatgrass gluten ayinahhala?
A: Kungaba, kuye ngokuthi uvuna kanjani. Ukolweni i-gluten, iphrotheni abantu abaningi abazwela kulo, alakhi otshanini obusha uqobo. Yakha kuphela okusanhlamvu, imbewu yesitshalo. Ngakho-ke, ingaba mahhala nge-gluten, inqobo nje uma lingekho ithuba lokuthi imbewu ingenele kumkhiqizo wakho ophelile.
Uma uvuna ngokucophelela ngaphezu kwezinsalela zembewu, kufanele kungabikho i-gluten. Kodwa-ke, uma ukhula endaweni engenamhlabathi futhi uhlela ukusebenzisa sonke isitshalo, kungahle kube nezinsalela zembewu eziqukethe i-gluten kakolweni.
Amajusi we-wheatgrass akhiqizelwa ukuhweba kanye ne-powders nakho kuyakhohlisa. Yize singaqiniseka ukuthi asivumeli izingcezu zembewu kokudla kwethu ekhaya, abakhiqizi bezentengiselwano basebenza ngezinga elikhulu kakhulu. Izinhlamvu ezincane zingangena ngephutha emikhiqizweni yezentengiselwano. Ngenxa yalokhu, kubalulekile ukuthi uqiniseke ukuthi umkhiqizo owuthengayo ubhalwe ukuthi awuna-gluten nokuthi uyayethemba ikhwalithi nokuphepha kwemikhiqizo yaleyo nkampani.
Njenganoma yimuphi omunye umkhiqizo wemvelo, uma ungaqiniseki nakancane ngokusebenzisa i-wheatgrass, thintana nodokotela wakho noma isazi sokudla ngaphambi kokuwusebenzisa. Kuhlale kungcono ukuphepha kunokuzisola.
Q: Ingabe i-wheatgrass empeleni ikulungele?
A: Kungenzeka kungabi ikhambi eliyisimangaliso olifunayo, kepha yebo, i-wheatgrass ingakulungela. Njenganoma isiphi isitshalo esiluhlaza, esinamaqabunga, siqukethe amavithamini namaminerali abalulekile ekugcineni impilo.
ukugqoka kanjani amabhuzu amadada nge-skinny jeans
Ijusi le-Wheatgrass linenqwaba yamavithamini E. Leyo vithamini isetshenziswa yimizimba yethu njenge-antioxidant futhi ikhulisa amasosha omzimba, isisiza ukulwa nomkhuhlane noma umkhuhlane ovamile. Ngaphandle kwalokho, iyaqhathaniswa noma iphansi kokuqukethwe kwezakhi zomzimba kuneminye imifino eminingi enamaqabunga. Uzothola i-iron eningi, i-potassium, i-magnesium, i-calcium, namavithamini B no-C kusipinashi esinamaqabunga aluhlaza kunalokho ongakuthola kukolweni we-wheatgrass, yize uqukethe lawo amanani amancane.
Ngokuvamile, akukubi kakhulu kuwe kuneminye imifino enamaqabunga, futhi ngokuya ngokuqukethwe kukavithamini E kungcono kakhulu kuningi. Kepha akunakwenzeka ukuthi welaphe umdlavuza noma ube yi-panacea eminye imithombo ephakamisa ukuthi iyiyo.
uma uphupha ngomuntu kusho ukuthini lokho
amabra ngezingubo ezijulile v
umehluko wobudala obuphakathi kwabashadile
yini ongayisebenzisa ukukhulisa izinwele zakho